Nsogbu mbụ na Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Samsung emeela nke ọma na ọgbọ ọhụụ ya. Dị ka ya Samsung Galaxy S6 dị ka Samsung Galaxy S6 Edge ha abụọ bụcha ndị zuru ezu, cna arụmọrụ na elu nke njedebe dị elu na ihe mara mma mara mma nwere njiri mara mma. Ma ha abụghị ndị na-enweghị nsogbu.
Ma ọ bụ ugbua a na-akọ nsogbu na Samsung Galaxy S6. Fọdụ n'ime mpaghara izizi ndị na-erute ụfọdụ ndị ahịa, n'agbanyeghị agbanyeghị ọrụ gọọmentị bido echi Eprel 10, weta nkwarụ n'azụ ọkụ ọkụ nke ngwaọrụ nke na-adịgide n'oge niile.
Nsogbu mbu na Samsung Galaxy S6: oriọna LED ya anaghị agbanyụ
I gha iburu n'uche na ọ bụghị ntụpọ na-emetụta ọnụ niileỌ bụ ezie na ọ ka na-ewe iwe na mmalite mmalite dị elu na-amalite n'ụzọ a. Dabere na mkpesa nke ndị ọrụ emetụtara, ọkụ ọkụ ọkụ nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke onye nrụpụta Korea na-adịgide mgbe niile, ọbụlagodi mgbe ekwesighi iji ya.
Ezie na ọ bụ eziokwu na ọkụ ọkụ emepụtara adịghị na oke ike ya, ọ bụ ihe ngosi na ọ na-arụ ọrụ, ọkachasị na gburugburu ọkụ. Echiche mbụ, nke sitere na ụmụ okorobịa na ndị XDA Developers, na-ekwu maka enwere ike na Flash LED na-anata ihe ugbu a na obere ihipu na-eme ka ọkụ na-adị mgbe niile.
Luckily ụmụ okorobịa na Samsung anatala akụkọ banyere nsogbu a ma kwuo ya na-arụ ọrụ iji dozie site na nwelite software Samsung Galaxy S6 Ikanam flash nsogbu.
Nke a pụtara na ọbụghị ngwaike ngwaike, ma sọftụwia, ya mere, ihe ahụ adịchaghị njọ. N'ezie, ọ bụrụ na ịzụta Samsung Galaxy S6 ma ịchọta nsogbu a na ọkụ ọkụ na-echeta na ị nwere ụbọchị 7 iji gbanwee ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Nsogbu mbu na Samsung Galaxy S6: oriọna ikanam nke ụfọdụ nkeji anaghị agbanyụ
Echeghị m na ha nwere mmasị, yabụ na ha ekwesịghị ịgbalite ya n’ehihie iji see foto
Juan na Maria dijo
M laghachiri Galaxy S6 abụọ ihu na-ezighị ezi n'ihu igwefoto. Ha nwere ntụpọ ntụpọ
Zaghachi Juan maria